Mamerina ireo zava-mahaliana vaovao amin'ny dia sy ny fizahantany indray
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Mamerina ireo zava-mahaliana vaovao amin'ny dia sy ny fizahantany indray
Vaovao Mafana • Editorial • fanabeazana • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • WTN
Tsy mora ireo roa taona lasa izay. Ireo matihanina amin'ny fizahantany dia nahita ny indostrian'ny fizahan-tany izay taona vitsy lasa izay dia nahomby tokoa ary mila miady amin'ny fahaveloman'izy ireo. Mazava ho azy fa ny areti-mifindra eran'izao tontolo izao dia manana antony lehibe mahatonga an'io fihenam-bidy io. Mety ho hadisoana anefa ny manome tsiny ny olan'ny indostria rehetra amin'ny areti-mifindra. Ny mpanara-maso tsara ny sehatry ny dia sy ny fizahan-tany dia efa nahatsikaritra olana mety hitranga, manomboka amin'ny serivisy mpanjifa mahantra ka hatramin'ny fizahan-tany tafahoatra, vao 24 volana lasa izay.
Matetika ny antony iray mahatonga an'io fihenam-bidy io dia ny fiakaran'ny vidin'ny tapakilan'ny zotram-piaramanidina sy ny fisian'ny orinasa nanomboka nitady fomba hafa hifandraisana izay tsy dia lafo sy mahomby kokoa. Noho ny Covid-19 ny filàna mifandray tsy misy dia no nanafaingana ity fironana ity. Rehefa manahirana ny fitsangatsanganana miaraka amin'ny olana ara-toekarena malemy sy ny olana ara-pahasalamana toy ny areti-mifindra isika dia mazava fa ny fizahan-tany sy ny indostrian'ny fitsangatsanganana dia tsy maintsy mitady fomba vaovao sy mamorona. Ny indostrian'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany dia tsy azo atao mangina intsony. Tsy maintsy atsahatra ny mieritreritra fa ny zava-mitranga amin'ny indostria, fa ho lasa mpanentana amin'ny hetsika vaovao sy famoronana. Raha te hahomby amin'izao fotoana tsy mahazatra sy sarotra izao ny indostrian'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany, dia tsy maintsy manao mihoatra noho ny fiheverany ny tenany ho iharan'ny toe-karena na ny faharatsian'ny olon-kafa; tsy maintsy mandini-tena ihany koa izy mba hahitana hoe aiza koa no mety hihatsara.
Angamba ny loza mitatao lehibe indrindra ho an'ny indostrian'ny fialam-boly (ary amin'ny ampahany kely kokoa amin'ny indostrian'ny fitsangatsanganana ara-barotra) dia ny zava-misy fa ny fitsangatsanganana dia nanova ny fahafinaretan'ny dia ho lasa tontolon'ny fitsipika sy fepetra. Nandritra ny areti-mifindra vao haingana, ireo mpandeha taloha dia nilaza matetika fa maivamaivana izy ireo tsy voatery hiakatra fiaramanidina na hanao dia lavitra. Amin'ny tenany sy ny kalitao dia tsy maintsy manapa-kevitra foana ny habetsahana.
Indrindra indrindra amin'ny indostrian'ny fitsangantsanganana amin'ny fialam-boly, ity tsy fahampian'ny fahafinaretana sy fahafinaretana ity dia midika fa vitsy dia vitsy ny antony maniry handeha sy handray anjara amin'ny traikefa fizahan-tany. Ohatra, raha mitovy daholo ny toeram-pivarotana rehetra na raha mitovy ny sakafo ao amin'ny hotely rehetra, nahoana raha mijanona ao an-trano fotsiny? Nahoana no misy olona te hampiditra ny tenany amin'ny loza sy ny fahasahiranana amin'ny dia, raha ravan'ny olona tsy mahalala fomba sy miavonavona ny famosaviana? Fanontaniana lalina tokony apetraky ny matihanina amin'ny fizahantany sy ny fizahantany ireo.
Mba hanampiana ny toerana misy anao na ny mahasarika anao hamerina kely ny tantaram-pitiavana sy fahafinaretana amin'ny indostrianao, Tidbits momba ny fizahantany manolotra ireto sosokevitra manaraka ireto.
Antitrantero ny zavatra atolotry ny vondrom-piarahamoninao izay miavaka. Aza miezaka ny ho zava-drehetra amin'ny olona rehetra. Maneho zavatra miavaka. Manontania tena: Inona no mampiavaka ny vondrom-piarahamoninao na ny mahasarika anao sy miavaka amin'ireo mpifaninana aminao? Ahoana no ankalazan'ny vondrom-piarahamoninao ny maha-izy azy? Moa ve ianao mpitsidika ny vondrom-piarahamoninao, ho tsaroanao izany andro vitsivitsy taorian'ny nialanao, sa toerana iray hafa eo amin'ny sarintany? Ohatra, aza manolotra traikefa an-kalamanjana fotsiny, fa ataovy manokana izany traikefa izany, ataovy manokana ny lalan-tongotrao, na mamolavola zavatra manokana momba ny traikefanao amin'ny tora-pasika na renirano. Raha, amin'ny lafiny iray, ny vondrom-piarahamoninao na ny toerana alehanao dia famoronana avy amin'ny saina dia avelao ny saina hivezivezy ary hamorona traikefa vaovao hatrany. Andramo ny mijery ny fiaraha-monina na ny mahasarika anao amin'ny mason'ny mpanjifanao.
- Aoka ho hafahafa. Raha manangana kianja golf ny vondrom-piarahamonina hafa, dia manangana zavatra hafa, eritrereto ho firenena hafa ny vondrom-piarahamoninao na ny toerana halehanao. Tsy tian'ny olona ny sakafo sy ny fiteny ary ny fomba fanaony any an-tranony. Amidio tsy ny traikefa ihany fa ny fahatsiarovana ihany koa amin'ny maha-samihafa azy amin'ny toerana hafa. Amidio ny tenanao fa tsy olon-kafa!
- Mamorona fahafinaretana amin'ny alàlan'ny fampivoarana vokatra. Manaova dokam-barotra kely ary manolotra bebe kokoa. Mihoatra noho ny nantenaina foana ary aza manamafy ny raharahanao. Ny endrika tsara indrindra amin'ny varotra dia vokatra tsara sy serivisy tsara. Omeo izay fampanantenanao amin'ny vidiny mirary. Fantatry ny besinimaro fa tsy maintsy mahazo ny karamany isan-taona ao anatin'ny volana vitsivitsy ny toerana misy ny vanim-potoana. Ny vidiny ambony dia mety ekena fa ny fandrefesana dia tsy mety.
- Ataovy azo antoka fa mahafinaritra ny olona manompo ny mpanjifanao amin'ny asa. Raha mankahala mpitsidika ny mpiasanao, ny hafatra omeny dia iray izay manimba ny fahatsapana ho miavaka. Matetika ny mpitantana dia liana kokoa amin'ny diany manokana noho ny traikefan'ny mpiala sasatra. Ny mpiasa iray tsy manam-paharoa, mampihomehy, na mahatonga ny olona hiala amin'ny fahatsapana manokana dia mendrika an'arivony dolara amin'ny dokam-barotra. Ny mpitantana ny fizahantany sy ny GM amin'ny hotely dia tokony hanao ny asa rehetra ao amin'ny indostriany farafahakeliny indray mandeha isan-taona. Matetika ny mpitantana ny fizahan-tany dia manosika mafy ny farany fa ny mpiasany dia olona manana fanaintainana sy fanaintainana, faniriana ary filana.